कुकुरहरू कलर लगाउन चाहँदैनन्, हामीले के गर्नुपर्छ? - शेन्ज़ेन TIZE टेक्नोलोजी कं, लि।
कुकुरहरू कलर लगाउन चाहँदैनन्, हामीले के गर्नुपर्छ?
सबै कुकुरहरू सुरुमा कलर लगाउन इच्छुक हुँदैनन्। धेरै साथीहरूका कुकुरहरू अनिवार्य रूपमा घबराएका छन् र पहिलो पटक कलर लगाउने बानी छ। कलर लगाएपछि, तिनीहरू हिंड्न अनिच्छुक थिए र केवल भुइँमा सुताए। कसरी मालिकले पर्याप्त कलर लगाउनु पर्छ र कुकुरले के गर्नु हुँदैन?
पहिलो चरण यदि तपाईले कुकुरको सामना गर्नु भयो जुन कलर लगाउन अस्वीकार गर्दछ। हामी यसलाई तुरुन्तै कलर दिन हतार गर्दैनौं, कुकुरलाई केही समयको लागि स्वतन्त्र रूपमा जान चाहँदैनौं (अवश्य पनि, आफ्नै आँखाले), वा कुकुरसँग केही समयको लागि अन्तर्क्रिया गर्दछौं। जब कुकुर आराम र खुशी हुन्छ, उसले कुकुरलाई कलlar्क गर्न कोसिस गर्दछ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि छनौट गरिएको कलर सही आकार हुनुपर्दछ र सामग्री सहज हुनुपर्छ। कुकुरको कलर दिँदा यसलाई चाँडो सारिनुपर्दछ, यो सब भन्दा छोटो समयमा गरिनुपर्दछ, र यसले कुकुरको घाँटी दुख्नु हुँदैन।
दोस्रो चरणमा, यदि कुकुरले कलर लगाएपछि अनुकूल गर्न सक्दैन, यसलाई हतारमा हटाउनु हुँदैन। यसको सट्टामा, कुकुरको शरीरलाई स्ट्रोक गर्ने, यसको कलर मिलाउने, र बिस्तारै यसलाई कलर लगाउने अनुभूति गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
केहि समय पछि, जब कुकुरले कलर लगाउन अनुकूल गर्दछ, यसले अबदेखि डराउँदैन। यस विन्दुमा, तपाईं ट्र्यासन रस्सीमा झुन्ड्याउन कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि कुकुरलाई हिंड्न बाहिर लैजानुहुन्छ।
Dog चरणहरू तपाईको कुकुरलाई कलर अनुकूल गर्न प्रशिक्षण